भद्रगोल आउँछ भन्ने बित्तिकै दर्शकलाई बन्द हुने पीर ! - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२४ माघ,२०७३ | Forseenetwork
हाँस्य टेलिश्रृङखला भन्द्रगोल पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । छोटो समयमा दर्शकको मन जित्न सफल भद्रगोलको प्रतिक्षामा धेरै दर्शक छन् । देशको जल्दो बल्दो राजनीतिक अनि समसामयिक विषय बस्तुमा ब्यङग्य गर्दै आईरहेको भद्रगोल यो शुक्रबारबाट पुनःप्रसारणमा आउने जानकारी कलाकार कुमार कट्टेले गराएका छन् । विभिन्न समस्याका कारण भद्रगोल सञ्चालनमा नआए पनि कुमार कट्टेल उर्फ जिग्री, अर्जनु घिमिरे उर्फ पाँडे लगायत कलाकारहरुलाई भने फुर्सद छैन । भद्रगोलले हाँस्य कलाकारको रुपमा स्थापित भएका कलाकारहरु अहिले त्यही सिरियलकोे संवाद, अभिनय र उपनामबाट निकै चर्चामा छन् ।
उनीहरु देश विदेशमा हुने विभिन्न सास्कृतिक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिएर दर्शक हँसाईरहेका छन् । अहिले पाँडे र जिग्री सप्तरीको गम्हरियामा रहेका ३ विपन्न तथा दृष्टिविहिन परिवारको घर निर्माणमा जुटेका छन् । कुमार कट्टेल उर्फ जिग्रीले शुक्रबार देखि भन्द्रगोल आउँछ भनेर सामाजिक सञ्जालमा मार्फत जानकारी गराएका छन् भने दर्शकले फेरि बन्द हुने त होईन ? भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । भ्रदगोल मनपराउने दर्शकहरुले अब यसको समय थप्नुपर्ने समेत माग गरेका छन् । कलाकार कुमार कटट्ेल उर्फ जिग्रीले हामी सँगको कुराकानीमा पुरानै समयमा प्रसारण हुने तर कलाकारमा थपघट हुने बताउँदै अब बन्द नहुने पनि बताएका छन् ।
सप्तरीको दृष्टिबिहीन मण्डल परिवारका लागि घर निर्माणमा जुटेका हाँस्य कलाकार कुमार कट्टेल जिग्री र अर्जुन घिमिरे पाँडेलाई सहयोग गर्ने क्र..